मैले फेरि थपेँ, ‘अब ७० करोड धोती बोक, गधाले झैं।’ त्यसपछि भण्डारीलाई मार्नुपर्छ, यो राजाको दलाल हो भने। मैले भनेँ, ‘मलाई के मार्छौ, तिमीहरूलाई मार्ने (भारत) आउँदैछ ...।’
[caption id="attachment_62806" align="aligncenter" width="635"] तस्बिर स्रोत: फ्रन्टलाइन[/caption]
नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईं कसरी हेरिरहनुभएको छ? खासगरी भारतको एउटा मुख्य मन्त्रीका रूपमा ...
उसले ‘किन’ भनेर सोध्यो। मैले भनेँ, ‘नेपाललाई मधिसेहरूले खाइसकेछन्। तिमीहरूले अब नेपाललाई पनि सिध्याउने भएछौ ... ।’
अर्को कुरा, हिन्दुस्तानका अरू नेपाली र सिक्किमका नेपाली फरक छ। हामी ‘प्रवासी’ नेपाली होइनौं। हाम्रो एउटा राष्ट्र थियो, छुट्टै राजा थियो। हामी आफ्नो राजाको सिन्दुर पहिरेका नेपाली हौं। यस्तो स्थितिमा ‘नेपालबाहिर बसेर’ भन्ने शब्दले अनर्थ गराउँथ्यो। उनीहरूलाई के खोज्छस् कानो आँखो भनेझैं हुन्थ्यो। मैले पुरस्कार थापेको भए उनीहरू तुरुन्तै त्यो प्रमाणपत्र लिएर आई भन्ने थिए, ‘मिस्टर भण्डारी, यु आर नेपाली फ्रम नेपाल। नेपाल ने कह दिया कि तुम नेपालके हो और इसे तुमने स्वीकार भी किया ...।’ (हाँस्दै) मलाई त शंका लाग्छ, कमल दीक्षितजीसित भेट भयो भने सोध्नुछ, ‘के तपाईंलाई ‘र’ ले फिट गरेको त छैन– भण्डारीलाई यस्तो सर्टिफिकेट दिउँ र डुबाइदिउँ भनेर?’
के यसलाई बहिष्कार हुनबाट जोगाउन सकिँदैन थियो? त्यसको भाषा फेरेको भए ...
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७४, ०३:३१:३८